सेताम्मे कालिञ्चोकमा 'स्की'को खोजी [फोटो फिचर] - फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
सेताम्मे कालिञ्चोकमा 'स्की'को खोजी [फोटो फिचर]
पुस २४, २०७३-धार्मिक तथा पर्यटकीय रुपमा चर्चित कालिञ्चोक क्षेत्र पुसको दोस्रो साताबाट हिउँले ढाकिँदै आएको छ ।
हिमपातसँगै कालिञ्चोकमा हिउँ खेल्न जानेको संख्या अत्याधिक छ । चारैतिर हिमाल अनि सुन्दर फाँटले कालिञ्चोकलाई स्वर्गको एक टुक्रा बनाएको छ । यही स्वर्गको टुक्रामा दोलखामा विदेशी पर्यटक आकर्षण गर्ने अनेकौं सम्भावनाको खोजी पनि भइरहेको छ ।
कालिञ्चोकमा दर्शनार्थी सहज बनाउन केवलकार निर्माण जारी छ । पछिल्लो समय केही युवा कालिञ्चोकमा हिउँमा खेलीने स्किको सम्भावना खोजीरहेका छन् । उनीहरुले पहिलोपटक कालिञ्चोकमा यो साहसिक खेललाई बुधबार र बिहीबार परिक्षण प्रयोग पनि गरिसेका छन् । यसअघि यिनै युवाले दोलखाको रोल्वालिङ क्षेत्रको ना गाउँमा स्कीको सम्भावना पहिचान गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा खुवै रुचाईएको यो साहसिक खेल कतिको सम्भावना छ त दोलखामा ? यसका अभियन्ता स्की एण्ड स्नोवार्डिङ फाउण्डेशनका अध्यक्ष उत्सव पाठक भन्छन्, 'ठूलै सम्भवाना छ दोलखामा ।'
तस्बिर : सौगात थापा
प्रकाशित: पुस २४, २०७३
जेलमा ९५ वर्षीय मण्डल देखेपछि भट्टराईले प्रश्न गरे, 'देशमा लोकतन्त्र छ कि छैन ?' ›